Olee otú Tinye Metadata ka MP3 Mfe
> Resource> MP3> Olee otú iji Tinye Metadata na faịlụ MP3
Metadata bụ ihe na-ji kọwaa music onwe ya na echekwara na music faịlụ. Ọ na-amara dị ka ID3 mkpado maka faịlụ MP3, nke e dere ozi dị ka track aha, ọgụ egwu genre, tọhapụ afọ, album artwork na ọbụna lyrics. Ma metadata echekwara na songs nke gị na nnukwu music n'ọbá akwụkwọ ọ bụghị mgbe niile emebibeghị ma ọ bụ ziri ezi, otú ị mkpa ka ịgbakwunye metadata na faịlụ MP3 site onwe gị. Gịnị bụ kacha ụzọ mee nke a? Wondershare TidyMyMusic maka Mac (Wondershare TidyMyMusic) na-ike na-atụ aro. Ọ bụ ihe niile-na-otu ngwá ọrụ na-akpaghị aka chọta ihe ọmụma nile nke ọ bụla song na ọbụna ọcha gị music n'ọbá akwụkwọ site na iwepu duplicates. Ike na-eche ka a na-agbalị ugbu a? Anya na Walkthrough n'okpuru.
1 Tinye gị music n'ọbá akwụkwọ a usoro
Download a usoro iji wụnye na gị Mac. Oge ọ bụla ị na-emeghe ya, ọ ga na-akpaghị aka tinye gị iTunes n'ọbá akwụkwọ na-egosi na faịlụ tree n'okpuru idozi iTunes.
Cheta na: N'ihi na gị ọzọ music bụghị jisiri site iTunes, ị nwere ike ịga idozi Music mbubata site dọlite ​​music nchekwa na faịlụ tree ma ọ bụ ịpị Open File bọtịnụ.
2 Chọta metadata nile MP3 faịlụ
Iji chọta metadata nile MP3 faịlụ na ogbe, gị na mkpa iji pịa iṅomi bọtịnụ na tinye akara checkbox nke Chọọ maka unidentified Songs. Mgbe ahụ, a omume ga-amalite ịmata niile songs ma na-achọta metadata maka MP3 faịlụ.
Rịba ama: Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata a ụfọdụ song, dị nnọọ pịa song na-ahụ otu ihe Chọpụta bọtịnụ na ala n'aka nri. Pịa bọtịnụ na-amalite usoro.
3 Tinye metadata ka MP3 songs
Mgbe ha niile metadata na-chọpụtara, i kwesịrị embed ya ndị songs. Ọ dị mfe na TidyMyMusic. Dị nnọọ họrọ songs na pịa Mee bọtịnụ na ala n'aka nri. Ị nwere ike họrọ ọtụtụ songs n'otu oge.
Dezie metadata ọmụma: Nke a na usoro-enye gị ohere dezie metadata site onwe gị. Dị pịa Dezie na akara ngosi na jupụta na edezi ubi. Ịgbanwe album artwork, gị na mkpa iji ịdọrọ a Obodo image ka album artwork ebe.
Wepụ duplicates: Tinye akà rà checkbox nke Chọọ maka duplicated Songs na pịa iṅomi button, mgbe ahụ, niile duplicated songs nwere ike chọpụta na i nwere ike ikpebi nke otu onye ịkwaga ahịhịa.
Azụ ọzọ. Download a usoro inye a laa. Ị ga-n'anya ya.